Warshadda Jeermiska Jeermiska & Bacriminta | Shiinaha Soosaarayaasha iyo Bacriminta Sifeeyaha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
SGL Series Steer Sterilizer
Maaddaama ay tahay xarunta keliya ee R&D ee qalabka jeermiska iyo nadiifinta, SHINVA waa unugga ugu weyn ee qabyo-qoraalka ee heer qaran iyo warshadeed ee qalabka nadiifinta. Haatan SHINVA waa saldhiga ugu weyn ee wax soo saar ee qalabka nadiifinta iyo jeermiska ee adduunka. SHINVA waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada ISO9001, CE, ASME iyo nidaamka maaraynta markabka cadaadiska.
SGL jeermiska guud ee uumiga wuxuu si buuxda u buuxiyaa shuruudaha heerka GMP waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa nadiifinta qalabka, dharka nadiifka ah, caag joojiyayaasha, koofiyadaha aluminium, alaabta ceyriinka ah, miirayaasha iyo dhexdhexaad dhaqameedka meelaha injineernimada dawooyinka, caafimaadka iyo caafimaadka, xoolaha sheybaar iyo wixii la mid ah.
YQG Taxanaha Daawooyinka
Mashiinnada GMP waxaa soo saaray SHINVA sida ku cad GMP-ga oo horay ayey u dhaqi kartaa, u dhaqi kartaa, u dhaqi kartaa una qallajin kartaa alaabada. Nidaamka maydhista waa mid la soo celin karo oo la diiwaangelin karo, sidaas awgeedna awood u leh inuu si buuxda u xalliyo tayada aan degganeyn ee habka gacmo-dhaqashada. Mashiinadan taxanaha ahi waxay la kulmaan shuruudaha FDA iyo EU.
Taxanaha GD Sterilizer Qalalan Heat
Aaladda jeermiska kuleylka ee qalalan waxaa badanaa loo isticmaalaa nadiifinta waxyaabaha heerkulka sarreeya u adkaysta. Waxay u isticmaashaa hawo kulul oo wareegaysa sidii warbaahin ka shaqeysa nadiifinta iyo hoos u dhigidda jirka waxayna la kulantaa shuruudaha Shiinaha GMP, EU GMP iyo FDA. Maqaallada geli qolka, bilow wareegga jeermiska ka dib, ka dib wareeji marawaxadda, dhuumaha kululeeyaha iyo hawo-qaadeyaasha hawada ayaa ka wada shaqeyn doona kuleylka degdegga ah. Iyada oo gacan ka heleysa marawaxadaha wareegga, hawada kulul ee qallalan waxay ku qulquleysaa qolka iyadoo loo marayo habka heerkulka sare ee u adkeysanaya HEPA waxayna sameysaa socodka hawada oo isku mid ah. Qoyaanka dusha sare ee maqaalka waxaa qaata hawo kulul oo qallalan ka dibna waxaa laga sii daayaa qolka. Marka heerkulka qolku gaaro qiime cayiman, waalka qiiqa waa la xiraa. Hawada kulul ee qallalan waxay ku wareegaysaa qolka. Qaadashada hawada cusub ee goosgooska ah, qolku wuxuu leeyahay cadaadis wanaagsan. Ka dib marka wejiga jeermiska la joojiyo la dhammeeyo, hawo nadiif ah ama biyo qaboojiye ka soo gala tubbada ayaa u furan qaboojinta. Marka heerkulku hoos ugu dhaco qiimaha la dejiyay, waxaa xirma fureyaasha otomaatigga ah, waxaana la siiyaa qaylo-dhaan la maqli karo iyo muuqaal ahaan si loogu muujiyo albaabka furmaya